Wholesale Medical Inodhonzwa Chiso Mask Fekitori uye Mugadziri | JBH Chiremba
1. FDA, CE Yakagamuchirwa
2.Disposable maski inoumbwa neyekunze isina-yakarukwa machira, yepakati yakanyauswa yakarukwa machira uye yemukati isina-yakarukwa machira, kapurasitiki kemhino clip uye mask bhandi.
3. Pfeka anti mask yedu yeguruva mask kubasa kana pakubuda kunochengetedza hutano uye kuchengetedzeka
4. Kubatsira iwe kufema zvirinyore nekudzivirira nzira yako yekufema kubva kune zvinosvibisa uye ma allergener, uye nekuichengeta isingaiti zvakanyanya sezvinobvira
5. Mushure mekupfeka chifukidzo, chinofanirwa kukwanisa kuvhara muromo, mhino uye chirebvu cheiye akapfeka
6. Yakasununguka nzeve nzeve, uye zvinyoro nyoro nzeve chiredzo kubvisa kumanikidza kwenzeve uye kukupa wakasununguka kupfeka ruzivo
Mask firita zvinhu
Maumbirwo ejasi regirazi ane kusabatana kwakasimba kumeso kwemunhu. Zvidimbu zvidiki zvakawanda zvinokuvadza zvakanyanya kwatiri zvinopinda munzira yekufema kuenda kumapapu kuburikidza nepakati pakati pechifukidzo nechiso. Sefa zvinhu zvinowanzo kuve zvemachira machira. Iyo chete nzira yekuwana yakakwira guruva ichivharira kugona ndeyekuwedzera iyo hukobvu, uye zvakashata mhedzisiro yekuwedzera ukobvu kuita kuti mushandisi anzwe kuti kufema kwekudzivirira kwakakura uye kusagadzikana. Mucheka wakagadzirwa nemagetsi usina kurukwa haugone kungovhara guruva rakakura, asi zvakare nemagetsi emagetsi akasungirirwa pamusoro payo anogona kutora guruva rakanaka kuburikidza nekukwezva kwemagetsi, ichiwana kugona kukuru kwekuvhara. Iyo hukobvu hweiyo firita zvinhu yakatetepa kwazvo, iyo inoderedza zvakanyanya mushandisi kufema kusagadzikana uye inonzwa kugadzikana, nokudaro ichizadzisa matatu anodikanwa mamiriro etsika yakanaka firita zvinhu zvatambotaura pakutanga. Iine yakanaka firita yezvinhu uye nesainzi yakagadzirirwa mask chimiro, inoshanda uye yepamusoro mhando mask inoumbwa.
Iyo anti-padivi leakage dhizaini yemask ndeyokudzivirira mweya kuti usapfuure nepakati peiyo maski uye kumeso kwemunhu pasina kuyamwa kuburikidza nemusefa. Mhepo yakafanana nekuyerera kwemvura, uko kushomeka kuri kushoma, kunoyerera kutanga. Kana chimiro chemaski chisiri padyo nechiso chemunhu, zvinhu zvine njodzi mumhepo zvinozodonha kubva mukuomesa wopinda munzira yekufema yemunhu. Saka, kunyangwe iwe ukasarudza mask ine yakanakisa firita zvinhu. Uyewo haikwanise kuchengetedza hutano hwako. Mitemo mizhinji yekunze uye zvirevo zvinoratidzira kuti vashandi vanofanirwa kugara vachiedza kuomesa kwemasikisi. Chinangwa ndechekuona kuti vashandi vanosarudza mamask ehukuru hwakakodzera uye vanopfeka masiki mumatanho akakodzera.
Nenzira iyi, vashandi vanozoda kuomerera pakuapfeka munzvimbo yebasa uye nekuvandudza mashandiro avo ebasa. Iyo masks-ekuchengetedza-emahara mune dzimwe nyika haadi kucheneswa kana kutsiviwa. Kana guruva redziviriro rikaguta kana chifukidzo chakakuvara, chinoraswa. Izvi hazvingovimbise chete hutsanana hwemasiki, asi zvakare zvinoponesa vashandi nguva nesimba rekuchengetedza mask. Zvakare, akawanda masiki anotora arched maumbirwo, ayo asingakwanise kungo tarisira kukwana kwakaringana nechiso chimiro, asi zvakare chengetedza imwe nhanho yenzvimbo mumuromo nemumhino, iyo yakagadzikana kupfeka.
Zvadaro: Inotakurika Inotakurika Murwere kuendesa Lift hoist yevakaremara
kuraswa kumeso nhoo
kumeso kumeso kwechirwere
medical kumeso masks
masiki anoraswa, chinogadziriswa mubhedha wevarwere, wemagetsi murwere anosimudza, zvokurapa chinjika mubhedha, hydraulic murwere anosimudza, medical kumeso masks,
chinogadziriswa mubhedha wevarwere, masiki anoraswa, hydraulic murwere anosimudza, wemagetsi murwere anosimudza, medical kumeso masks, zvokurapa chinjika mubhedha,